/ Xilliyada-fasaxa ah ee Hämeenlinna / Barashada iyo tusaale. muusiga
Iskuulka Aimo wuxuu kuu fidinayaa xilliyada iskuulka xillyada ka baxsan inuu kuu qorsheeyo xirfadaha aragtida waxbarasho ku saleysan oo loogu talogaley caruuraha iyo dadka waaweyn ee reer Hämeenlinna. Iskuulka Aimo waxbarashadiisu waa lacag. Kooxuhuna waxay ku bartaan galbihii warshada dharka ee gurigga-ARX.
Wixii warbixin dheeraad ah ee waxbarashada farshaxanka aragtida waxaad ka heleysaa halkan.
Rocktehdas waa koox, taas oo dhamaan wixii jecel inay wax garaacaanba lagu soo dhaweynayo bilaa imtixaan. Rocktehdaska kooxaheedu waaweyni waxay ku wajahan yihiin dhallinyarada (13 – 18 –jirada ah). Waxaa soo dalban kara in ay wax ka bartaan sidoo kale carruurta (8 – 12 –jirada ah) iyo waxbarashada dadka waaweyn (ka weyn 18-jirka, ma laha da’a ugu weyn).
Wixii warbixin dheeraad ah ee waxbarashada qalab garaacista Rocktehdaska waxaad ka heleysaa halkan.
Machadka-Sibelius carruurta iyo dhallinyaradu waxay ka baran karaan muusiga klassiga ah iyo laxameynta muusiga iyo sidoo kale klassig balettiga, qoob ka ciyaarka casriga ah, bandhigga qoob ka ciyaarka iyo mahrajaanka. Machadka-Sibelius waa lacag.
Wixii warbixin dheeraad ah ee waxbarashada qoob ka ciyaarka ee machadka- Sibelius waxaad ka heleysaa halkan.
Machadka Vanajavesi waxaad ka baran kartaa sida. luqadaha, farshaxanka, muusiga, soo bandhigidda qoraalada, soo bandhigidda ruwaayadaha, farsamada gacanta, fashinka iyo mahrijaanada iyo sidoo kale aqoonta- iyo teknikada farriin gudbinta. Machadka Vanajavesi waxbarashadiisu waa lacag.
Wixii warbixin dheeraad ah ee la xidhiidha koorsooyinka machadka Vanajavesi waxaad ka heleysaa halkan.
Magaaladda Hämeenlinnan: Warbixinta dadka dalka u soo guurey >>
Hämeen Setlementti: Barta kullanka >>
Magaaladda Hämeenlinna: Xarunteeda qaabilaada qaxootiga >>
Magaaladda Hämeenlinna: Tusaaleynteeda jimicsiyada >>
Iittalan yhtenäiskoulun kuudesluokkalaiset viettävät metsäpäivää perjantaina 25.9.2020 24.09.2020
Kaupunki kunnioittaa tänään Vexi Salmen siunaustilaisuutta suruliputuksella 24.09.2020
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin avoin kirje kantahämäläisille 24.09.2020
28.09 6:00 - 28.09 9:00